Tesla ၏ အရောင်းဆိုင်များ လျှော့ချမည် - Pandaily
Tesla ၏ အရောင်းဆိုင်များ လျှော့ချမည်
Aug 03, 2021, 21:29ညနေ 2021/08/04 06:06:06 Pandaily
Tesla ၏ အစီရင်ခံစာအရ တရုတ်တွင် အရောင်းဆိုင်များ အရေအတွက် လျှော့ချရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်း Tesla ၏ ပထမဆုံး ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ပြောသည်။ သညျအစား ကုမဏီက စီစဉျဆောကျလုပျတဲ့ ပုံမှနျမျောတျောကား ဈေးဆိုငျခနျးတှေ ပိုမိုမြားပွားလာပွီး ရိုးရာဆိုငျခနျး 4S ပုံစံနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကုနျပစ်စညျးတှကေို ပွသပွီး အရောငျးမွှငျ့တငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Tesla က ၎င်း၏ အတွေ့အကြုံများကို Shanghai တွင် ကုသပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်အရေအတွက်သည် ၁၉ အိမ်မှ ၁၀ အိမ်ဝန်းကျင်အထိ လျှော့ချမည်ဟု ဆိုသည်။ နောကျကှယျက အကွောငျးရငျး အနညျးငယျတော့ ရှိနပေါ တယျ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ Tesla ဟာ အခုအခြိနျမှာ နာမညျကွီးတံဆိပျတှေ မွငျ့မားလာတဲ့အတှကျ ကုနျတိုကျကွီးတှလေိုမဟုတျတော့ဘဲ အခွားလူအသှားအလာမြားတဲ့နရောတှမှော မွငျ့မားတဲ့ ယာဉျကွောကပျြတညျးမှုကို လြှော့ခပြွီး ကုမဏီရဲ့ ငှားရမျးခစရိတျကို လြှော့ခခြဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယအခကျြကတော့ ရောငျးအားတိုးတကျလာတာနဲ့ အမြှ ရောငျးအားတှေ ပိုမိုတညျဆောကျလာဖို့ပါ။
“Tesla က ရှန်ဟိုင်း ခရိုင်တစ်ခုစီမှာ အလားတူ 4S Shopping ဆိုင်များ ဆောက်လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်၊. ကုမ္ပဏီကတော့ City Motor ဈေးဆိုင်ခန်းတွေအနီး ကွင်းဆင်းရှာဖွေဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်၊ ခုလို ရိုးရာကားအရောင်းပြခန်းတွေ ငှားရမ်းဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်၊ သူတို့အတွက်ဆိုရင် အရင်က ကားအရောင်းပြခန်းတွေကို အသုံးပြုသွားမှာပါ၊ နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ နေရာတွေအတွက် ပြုပြင်ပေးသွားမှာပါ” လို့ နီးစပ်သူတဦးက ပြောပါတယ်။
ယင်းကစားကွင်းများကို 4S ဟု ထင်ရသော ကားရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်များသာမက အမှန်တကယ် အသစ်တည်ဆောက်ထားသော ဆိုင်များတွင်ပါ Tesla က တိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ နောကျပွီး အဲဒီဆိုငျတှမှော ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးတှေ မလုပျဘဲနဲ့ အပျတယျ။ ဥပမာ အထကျပငျလယျကူး ယာဉျ၊ ငှကွေေး၊ လိုငျစငျ၊ ယာဉျပိုငျရှငျမြားကို သငျတနျးပေးခွငျး စသညျတို့ ပွုလုပျနဆေဲဖွဈပွီး ပွငျပတှငျ တံတားဦးယာဉျရောငျးဝယျရေး စငျတာက ဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈသညျ။ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှု လြှော့ခနြိုငျတာနဲ့ ဝနျဆောငျမှုနဲ့ အရညျအသှေးဆိုငျရာ ဝနျဆောငျမှုတှကေို လှယျကူစှာ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Tesla က ကားတွေကို မြန်မာရှေ့ဆောင်ကို တိုက်ရိုက် တိုက်ရိုက် ထိုသို့ ခင်းကျင်းပြသခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ Delivery, delivery, delivery, delivery, delivery center, delivery center, delivery center, Sale center, shopping mall Supermarket များတွင် လုံလောက်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေရန် ရောင်းချခြင်းဖြင့် မြို့ပြတည်ဆောက်မှု အတွေ့အကြုံ ဒါပမေယျ့ တံဆိပျရဲ့ ကြျောကွားမှုနဲ့အတူ ရောငျးအားလညျး ပိုမိုမွငျ့မားလာပွီး Tesla ရဲ့ မူဝါဒကိုလညျး ခြိနျညှိ လာပါတော့တယျ။
တရုတျကားသဈထုတျလုပျသူတှကေ အငျတိုကျအားတိုကျ သိမျးယူလိုကျတဲ့အတှကျ ကုနျတိုကျတှေ၊ စူပါမားကကျဆိုငျတှေ၊ စူပါမားကတျတှေ ငှားရမျးခတှေ မွငျ့တကျလာတယျလို့ ကုနျတိုကျတခြို့က ပွောပါတယျ။
Topics: မွငျကှငျးTesla ရဲ့ တရုတျထုတျ Model3ဈေးနှုနျးဟာ တှကျခွကေိုကျတဲ့ ဘကျထရီ ကို ဆကျလကျဖွတျ
Tesla ရဲ့ တရုတျသတငျးရငျးမွဈတဈခုက “ကုနျတိုကျနဲ့ စူပါမားကတျတှရေဲ့ ဈေးဆိုငျတှဟော အရငျတုနျးက ပုံမှနျအားဖွငျ့ အပွိုငျအဆိုငျ ငှားရမျး လုပျကိုငျလရှေိ့တဲ့ လုပျငနျးတှဖွေဈတဲ့ စားသောကျဆိုငျနဲ့ အထညျခြုပျ လုပျငနျးတှရေဲ. ငှားရမျးခတှေ လြော့နညျး မွငျ့မား လာပွီးတော့ ကားကုမဏီကွီးတှကေ ငှကွေေးအမွောကျအမွားနဲ့ ဝငျရောကျလာပွီး အလုံးစုံငှားရမျးခတှေ မွှငျ့တငျပေးနတော” လို့ ပွောပါတယျ။
သတင်းရင်းမြစ်များ၏ ပြောကြားချက်အရ Tesla သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် လိပ်စာအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောင်းချရသော်လည်း အခြားအမှတ်တံဆိပ်များကို လိုက်နာ ဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ ငှားရမ်းခမှာ Tesla ထက်ပင် မြင့်မားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Tesla သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ Model S နှင့် Model X တို့၏ ဈေးနှုန်းကို မြင့်တက်စေခဲ့သည့် ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဈေးနှုန်းမြှင့်တင်
ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ Tesla ရဲ့ တရုတျဝကျဘျဆိုကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ Television Version အရ Model S နဲ့ Model X ရဲ့ ဈေးနှုနျးဟာ ၃ သနျးလောကျ မွငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။
Cross-border Aug 04 ဩဂုတျ 5, 2021